Ukuthengisa umxholo: Libala into oyivileyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye uqalise ukuKhokela ngokulandela esiKhokelo | Martech Zone
Ngaba ukufumanisa kunzima ukuvelisa izikhokelo? Ukuba impendulo yakho nguewe, awuwedwa. Hubspot ingxelo I-63% yabathengisi ithi ukuvelisa izithuthi kunye nezona zinto ziphambili ngumceli mngeni wabo ophezulu.
Kodwa mhlawumbi uyazibuza:
Ndizivelisa njani izikhokelo zeshishini lam?
Ewe, namhlanje ndiza kukubonisa indlela yokusebenzisa ukuthengisa umxholo ukuvelisa izikhokelo zeshishini lakho.
Ukuthengisa umxholo sisicwangciso esisebenzayo onokuyisebenzisa ukuvelisa isikhokelo kwishishini lakho. NgokukaMarketo, I-93% yeenkampani ze-b2b zithi ukuthengisa umxholo kuvelisa izikhokelo ngakumbi kuneendlela zokuthengisa zesiko. Kungenxa yoko le nto Iipesenti ezingama-85% 0f b2b bathi isizukulwana esikhokelayo yeyona njongo ibalulekileyo yokuthengisa umxholo kwi2016.
Kwesi sikhokelo, uza kufunda ukuba ungazivelisa njani izikhokelo usebenzisa umxholo wentengiso. Ukuba ujonge ukuvelisa isikhokelo kwishishini lakho, ke uya kusithanda esi sikhokelo.
Inyathelo 1: Khetha abaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokuchanekileyo
Isicwangciso esifanelekileyo somxholo siya kubandakanya ukukhetha abaphulaphuli abafanelekileyo abaza kudla umxholo wakho. Ke ngoko, ngaphambi kokuba uqale ukudala umxholo wakho, kufuneka wazi umthengi wakho ofanelekileyo. Kuya kufuneka ube unolwazi oluneenkcukacha malunga nobudala babo, indawo abakuyo, inqanaba lomvuzo, imvelaphi yemfundo, isihloko somsebenzi, isini, iipeyinti zentlungu, njl.
Umntu othengayo umele iimfuno zabathengi bakho kunye nokuziphatha kwabo njengoko benxibelelana neshishini lakho. Esinye sezixhobo onokuzisebenzisa ukudala umthengi wakho yi-Google analytics okanye i-Xtensio.
Ungazifumana njani iinkcukacha zomthengi wakho oqinisekileyo kuGoogle Analytics
Ngena kwiakhawunti yeGoogle Analytics kwaye ucofe kwithebhu yabaphulaphuli. Ngaphantsi kwethebhu yabaphulaphuli ngabantu (iqulethe ubudala kunye nesini sabaphulaphuli bakho), ithebhu yomdla, ithebhu yeGeo, ithebhu yokuziphatha, iteknoloji, iselfowuni, njl.
Cofa nganye nganye ukubonisa iimpawu zabaphulaphuli bakho. Hlalutya idatha oyifumana apho ukuvelisa umxholo omkhulu kubaphulaphuli bakho.
Okwesibini, unokwenza umthengi wakho abe ngoncedo lwe Xtensio. Yisicelo esiza kukunceda ukuba wenze i-personas ezintle zomthengi ngoncedo lweetemplate. Ukuba awunazo iinkcukacha zomthengi wakho, ungazisebenzisa Ukukhawulezisa iqela lokuNxibelelana imibuzo ye-infographic.
Iimpendulo zale mibuzo ingentla ziya kukunceda uyile umthengi ofanelekileyo ukulungiselela abaphulaphuli bakho.
Nje ukuba uqonde ukuba ngubani abaphulaphuli bakho, ungayisebenzisa ukwenza umxholo oluncedo kubo.
Inyathelo 2: Fumana uhlobo loMxholo oLungileyo
Ngoku unomfanekiso womthengi wakho ofanelekileyo, lixesha lokuba ufumane uhlobo lomxholo ofanelekileyo kubo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zomxholo onokuzenzela abaphulaphuli bakho. Kodwa ngenjongo yesizukulwane esikhokelayo, kufuneka:
Iposti yebhlog: Ukudala iiposti zebhlog kubalulekile ekuziseni phambili. Ufuna iiposti zebhlog ezikumgangatho ophezulu eziza kufundisa kwaye zikhuthaze abaphulaphuli bakho. Izithuba zeblogi kufuneka zipapashwe rhoqo. Ngoku ka Hubspot, Iinkampani ze-b2b ezabhloga amaxesha angama-11 + ngenyanga zafumana ngaphezulu kwe-4x uninzi lukhokelela kunolo lubhlog kuphela amaxesha e-4.5 ngenyanga.
Iincwadi ze-E: Incwadi ye-E inde kwaye inobunzulu ngakumbi kunezithuba zebhlog. Yongeza ixabiso kubaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo kwaye sisixhobo esikhulu seenjongo zokukhokela. Abathengi bakho abanokukhuphela emva kokungena kuluhlu lwakho lwe-imeyile.
Umxholo wevidiyo: Ividiyo ifuna ixesha elininzi kunye nemali ukuyila. Nangona kunjalo, ivelisa ukubandakanyeka xa yenziwe kakuhle. Phantse I-50% yabasebenzisi be-intanethi jonga iividiyo ezinxulumene nemveliso okanye inkonzo ngaphambi kokundwendwela ivenkile.
infografikhi: I-infographics iya isaziwa ngakumbi kunangaphambili. Inedatha elungelelanisiweyo eboniswe kwifomathi ebonakalayo ebonakalayo. Ungayongeza kwiiposti zakho zebhlog kwaye wabelane ngayo kwinethiwekhi yemithombo yeendaba.
Ikhosi encinci: Unokwenza iikhosi ezincinci kwi-niche yakho ukuqhubela phambili ufundise abaphulaphuli bakho ukuba bazi ngakumbi ngeminikelo yakho. Olu inokuba luluhlu lwezithuba kwizihloko ezifanayo okanye kuthotho lweevidiyo.
webinars: IiWebinars zilungile kwiinjongo zokuvelisa okukhokelayo. Kuyanceda ukwakha ukuthembana kunye nokuthembeka kubaphulaphuli bakho. Yile nto ifunwa ngabaphulaphuli bakho ngaphambi kokuba benze ishishini nawe.
Ngoku ukuba uyazi uhlobo olufanelekileyo lomxholo oluya kuqhuba ukugcwala kunye nokuzijika zibe zizikhokelo zeshishini lakho, into elandelayo ekufuneka yenziwe kukujonga ijelo elifanelekileyo ukukhuthaza umxholo.
Inyathelo 3: Khetha iShaneli echanekileyo kwaye usasaze uMxholo wakho
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zesitishi onokuzisebenzisa ukuhambisa umxholo wakho. Banokuba simahla okanye bahlawulwe. Ijelo lasimahla alikhululekanga ngokupheleleyo njengoko uza kube uhlawula ngexesha lakho. Kuthatha ixesha elininzi ukusasaza umxholo kwaye ubone nesiphumo esibonakalayo. Amajelo asimahla abandakanya amanethiwekhi eendaba ezentlalo (i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, iPinterest, i-G +, i-Instagram, njl. Njl.
Imithombo yeendaba kwezentlalo ingqineke iyindlela esebenzayo yamashishini. Ngokwe-Ad Age, abathengi bathi amajelo asekuhlaleni idlala phantse indima enkulu ekuthengeni izigqibo njengakwithelevishini.
Awunyanzelekanga ukuba usebenzise onke amajelo, khetha kuphela efanelekileyo apho unokufumana khona abaphulaphuli ojolise kubo.
Kwitshaneli ehlawulelweyo, kuya kufuneka uchithe imali kwiintengiso. Izibonelelo zesitayile esihlawulelweyo ngaphezulu kwejelo lasimahla kukuba ziyakhawuleza ukufumana iziphumo kwaye zisindisa ixesha. Konke okudingayo kukuhlawulela iintengiso kwaye uya kuqala ukufumana ukugcwala okunokuguqula kukhokele. Ungabhengeza kwimidiya yoluntu (Twitter, Facebook, Instagram, njl.), Iintengiso zikaGoogle, iBing, njl.
Inyathelo 4: Lungisa iMagnet yakho ekhokelayo
Imagnethi ekhokelayo sisibonelelo esingenakuphikiswa osilungiselele abathengi bakho. Sisixhobo esifanele ukuba kujolise kubaphulaphuli bakho ukusombulula iingxaki zabo. Oku kuthetha ukuba kufanelekile, kuluncedo, kumgangatho ophezulu kwaye kube lula kubo ukwetyisa.
Umazibuthe wakho okhokelayo unokuba yi-e-ncwadi, iphepha elimhlophe, idemo, njl. Injongo yomazibuthe okhokelayo kukunceda abaphulaphuli bakho bafunde kuwe. Okukhona besazi ngawe, kokukhona baya kuthemba uphawu lwakho.
Udinga iphepha elilungileyo lokufika eliza kulinga abaphulaphuli bakho ukuba babhalise. Iphepha elifanelekileyo lokufika kufuneka lenze ukuba ubambe ii-imeyile zabakhenkethi bakho.
Njengomzekelo, le yeyona LeadsBridge yeyona nto ikhutshelweyo iimagnethi ezikhokelayo.
Enye indlela yokwandisa iziphumo zakho kukudibanisa isoftware yephepha lakho lokufika kunye nesoftware yakho ye-imeyile, enjengeMeyileChimp, iAweber, njlnjl .. Ngokukhawuleza nje ukuba abaphulaphuli bakho bangena kwidilesi ye-imeyile, isixhobo siya kuyigcina ngqo kwiCRM yakho okanye kwisoftware ye-imeyile. .
Inyathelo 5: Bhala iZithuba zeBlog eziphezulu
Ungawulibali umxholo wentengiso yomxholo. Ukuvelisa okukhokelayo kunye nokuthengisa umxholo kuyasebenza ngenxa yomxholo. Udinga ukubandakanya kakhulu kunye nomgangatho webhlog yokuloba abaphulaphuli bakho ukuba babe zizikhokelo.
Iposti elungileyo yebhlog kufuneka iqulathe umxholo onokucofa abaphulaphuli bakho ukuba bacofe kwaye bafunde. Isifundo sophando lweCopyblogger siveze ukuba Abantu aba-8 kwabali-10 baya kufunda ikopi yesihloko, kodwa kuphela sisi-2 kwaba-10 abaya kufunda okuseleyo. Ufuna umxholo oza kulukuhla iindwendwe zakho ukuba zicofe kwaye zifunde umxholo wakho.
Okwesibini, ixesha lokudala iposti yebhlog ye-300-500 ihambile. Umxholo wexesha elide uthathe indawo. Iposti yakho yebhlog kufuneka ibe nde, ibaluleke kwaye ifundise. Abaphulaphuli bakho kufuneka bafumane ixabiso kuyo. Kuba ubhala umxholo wexesha elide, ungongeza iifoto, iitshathi kunye ne-infographics kuyo ukuze kube lula kubaphulaphuli bakho ukuba bafunde.
Unokudibanisa neposti yebhlog enxulumene nebhlog yakho okanye kwezinye iiwebhusayithi kwizithuba zakho ukuze uqhubeke ukomeleza umgangatho wayo.
Inyathelo 6: Thetha nabaphulaphuli bakho
Enye indlela yokugcina abaphulaphuli bakho bebuyela kwibhlog yakho kukuzibandakanya nabo. Oku kuya kukunceda ukuba wenze indawo eyomeleleyo ejikeleze ibhlog yakho. Njengokuba abaphulaphuli bakho befunda ibhlog yakho kwaye ubakhulisa ngezithuba ezifanelekileyo, baya kuqala ukushiya amagqabantshintshi kwizithuba zakho zebhlog nakwindlela yakho yemithombo yeendaba. Qiniseka ukuba uphendula zonke izimvo zabo. Sukungabahoyi. Yenze kube lula kubafundi ukuba banxibelelane nawe ngokongeza iphepha lokunxibelelana okanye idilesi ye-imeyile kwibhlog yakho.
Inyathelo 7: Phinda ujonge abaphulaphuli bakho kwaye wenze iiNkokeli
Inyani yile, i-95% yabantu abatyelele iwebhusayithi yakho abayi kubuya kwakhona. Oko kuthetha ukuba akukho sizukulwana sikhokelayo kwishishini lakho. Ungayisombulula le ngxaki ngokusebenzisa ukujolisa kwakhona. Unokuphinda ujonge abafundi bakho bebhlog ukubabuyisela kwiwebhusayithi yakho okanye ubenze baguqukele kwizikhokelo. Unokwenza oku ngokubeka ipikseli okanye ikhowudi kwiwebhusayithi yakho. Xa nabani na esiza kwiphepha lakho ezokufunda umxholo, ungazifaka lula kwiintengiso kwezinye iiwebhusayithi okanye amajelo eendaba ezentlalo.
Umzekelo, ukuba umntu uza kwiwebhusayithi yakho ukuze afunde umxholo wakho kodwa angabhalisi okanye abhalisele i-bait yakho yasimahla yemagnethi, unokumlandela nayo kwiwebhu yonke. Baya kuhlala belubona uphawu lwakho kwaye luya kubakhumbuza ngokunikezela kwakho. Ukuphinda ucwangcise izinto kusebenza kakuhle. Iindwendwe zeWebhusayithi ezichazwe kwakhona bonisa iintengiso ziipesenti ezingama-70 kunokwenzeka ukuguqula. Kungenxa yoko le nto omnye kubathengisi abahlanu ngoku nibe nohlahlo-lwabiwo mali olunikezelweyo.
Sebenzisa ukuthengisa umxholo wokukhokelela phambili kuyindlela esebenzayo. Konke okufuneka ukwenze kukulandela isikhokelo esingentla.
Ngaba ukhe wazama ukusebenzisa ukuthengisa umxholo wokuhola phambili?
I-Pss… ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngesihloko esikhokelayo sokudala senze nje uluhlu olushushu lwe Iingcebiso ezili-101 zokunyusa iziphumo zakho zokuzala!
tags: ingxelo yabaphulaphulib2bUkuthengisa umxholo we-b2bkublogauthethelelo lophawuUlwaziso lwebrandUkuThengiswa kweMpahlaInkundlaukudala abameli beempawuuthengiseivangeli yabathengiukunyaniseka kwabathengiukugcinwa kwabathengizasemoyeniNxaxhebai-google analyticsIingxelo zabaphulaphuli bakaGoogleisizukulwana esikhokelayokhokelaleadgenzikhitshaneAmanani entengisoIkhosi encinciUkunika amandla ukuthengisaabantu ekujoliswe kubophezuluumxholo wevidiyowebinarxtensio
IWizard yoyilo: Yenza uMxholo oPhezulu woMgangatho weMifanekiso kwiMizuzu